Banyere Anyị - Tangres Industrial Co., Ltd
Glazed poselin taịl
Egbu maramara poselin taịl
Mma kapet taịl
Igwe anaghị agba nchara Kitchen imi
Ugboro abụọ Bow
Igwe anaghị agba nchara ókè
ụlọ ọrụ Ọnọdụ
Campany ozi ọma
Tangres Industiral CO., LTD e tọrọ ntọala ke 2010, emi odude ke "Chinese Efere City - Foshan Guangdong". Ebe ọ bụ na oruru, anyị ụlọ ọrụ emewo siri ọnwụ na management ozizi "na-arụkọ ọrụ otu obi na Mmeri ụwa na-ezi obi". Site ọnwụnwa na ihe isi ike, ọ na-amalite n'ime bukwanu-ọnụ ọgụgụ mba ọzọ ahia ụlọ ọrụ.
The akporo nke azụmahịa bụ gụnyere sourcing, ahịa, na gị n'ụlọnga maka ibubata na mbupụ. Anyị ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ dị nnọọ anya na ụgbọelu otú anyị nwere ike inyere aka ahịa na-enweta kasị mma oké osimiri ibu. Na ngwa-ngwa-agbanwe seramiiki ụwa, ụlọ ọrụ na-amalite ngwa ngwa, na ya ngwaahịa ahịa na-amụba kwa ọnwa, na seramiiki taịl nile, igwe anaghị agba nchara kichin sink, igwe anaghị agba nchara ókè, ịsa efere, 3D kapet tile, na otú ahụ na ngwaahịa na-ere ọma n'ime na n'èzí na mba na-emeri ndị ịhụnanya na elu otuto si anyị kpọrọ ahịa.
The ihe mere ụlọ ọrụ nwere ike ime ka ndị dị otú ahụ magburu onwe ya rụzuru na nkọ mpi bụ na ya magburu onwe na trendy ngwaahịa mma na-akpali na-eji ọkụ, na ya zuru okè mgbe-sales ọrụ merie ahịa, na ezigbo ngwaahịa ọnụ na ezi ọrụ na-egosipụta taa Tangres. Anyị otu nwere ezigbo ọkachamara ihe ọmụma na-arụ ọrụ nke devotedly na n'ụzọ dị irè. Business pesonel nwere ọkachamara mba ọzọ ahia ahụmahụ na ngwaahịa ihe ọmụma. Rụọ ata ọrụ aka na ọzụzụ, nweta English etoju kwuru mkpa òtù nke ọchịchị, na inweta International Documentation Specialist iru eru Certificate nyere site mkpa òtù nke ọchịchị.
Tangres , ime ngwa ngwa ahịa mgbanwe na-edu na-emekarị! Rụọ mgbe niile iji nweta izu okè! Ịgbalị kasị mma anyị ka afọ ju anyị na ahịa ọ bụla ùgwù!